Akụkọ - Usoro nkwa mgbochi ọrịa maka ụlọ ọrụ ịmaliteghachi ọrụ na mmepụta na obodo ahia mba ofesi na 2020
Amụma mkpuchi ọrịa na-efe efe maka ụlọ ọrụ ịmaliteghachi ọrụ na nrụpụta na obodo ahia mba ofesi na 2020
Dị ka "obere ụlọ ahịa obere ala na-echekwa miri emi" kwuru obodo Yiwu, tupu mwepụta gọọmentị nke mmalite nke mmepụta, yiwu obodo azụmahịa mba ọzọ kwupụtakwa na imeghe nke ngwaahịa ngwaahịa, mpaghara 1, mpaghara 2 ka malitere ọrụ. Aghọtara na iji nyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ mpaghara aka ịlaghachi ọrụ ozugbo enwere ike ma kwalite ụlọ ọrụ ịmalite ịmalite mmepụta, yiwu obodo guzobere ụlọ ọrụ amalite iji laghachi ọrụ na-eduga otu.
N’etiti ehihie n’otu ụbọchị ahụ, na mgbakwunye na bọs ahụ, e zigara 10 otu dị iche iche na henan, anhui, jiangxi, shaanxi, yunnan, guizhou na ebe ndị ọzọ, isi ihe na-eme njikọ na ụlọ ọrụ gọọmentị mpaghara, ndị ọrụ ụlọ ọrụ ime laghachi ọrụ, ma mee ka ndị ọrụ ọhụrụ mara mma.
Gbaa mbọ hụ na nkwupụta nke nkwanye
Na mgbakwunye na ịlụ ọgụ megide ọrịa ahụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ịnwe usoro mgbochi siri ike iji dozie nsogbu ya, nke abụghị naanị ihe dị mkpa iji kwado ọrụ ụmụ akwụkwọ, chebe ndụ ndị mmadụ na ịchọ mmepe, kamakwa nkwa siri ike iji merie agha ahụ megide oria ojoo. Nkwado maka ụlọ ọrụ mmalite, February 16, yiwu obodo ndị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe a na-edebe akwụkwọ ma mepụta ihe dị mkpa iji dozie nsogbu ọhụụ ọrịa coronavirus nke ọma iji hụ na ọrụ ụlọ ọrụ, enyemaka maka ọrụ ụlọ ọrụ na nnwere onwe ndị ọrụ ezi omume na-erite uru, mmejuputa nke ụgbọ mmiri ahụ, ụlọ ọrụ na-akpali akpali multimode debanye aha ndị ọrụ ọhụrụ yana ihe ndị ọzọ iji hụ na iwu dị ugbu a iji guzobe otu:
Nye ego nkwado ụgbọ ala. Gọọmentị ndị obodo ahụ ga-enye ego zuru ezu iji ego mgbazinye nke ndị ọrụ na-arụ ọrụ na ndị ọrụ nọ ebe ụlọ ọrụ ga-eburu ma bulie onye nlekọta njem nleta ma ọ bụ ụzọ ndị ọzọ nke ịkekọrịta ụgbọ ala n'etiti ụlọ ọrụ .
Nye ikike ka ịlaghachi onye ọrụ ezi omume. Tupu February 22, dị ka ụzọ ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ oloko, usoro ibu ibu maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ, tiketi ụgbọ oloko na-akwụ ụgwọ enyemaka zuru ezu; Maka February 23 BBB 0 February 29 maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ, na-ebelata enyemaka. Maka njem onwe onye laghachiri ndị ọrụ ezi omume, laghachiri tupu 22 February, dịka otu mpaghara ahụ ga-esi na-azụ ụkpụrụ ụgbọ okporo ígwè iji nye onyinye, enweghị ụgbọ okporo ígwè, ụgbọ okporo ígwè na-ezo aka na ngwongwo; Febụwarị 23 na-ekpebi February 29 ruo ezi omume, na-ebelata enyemaka. Nye onye ọrụ ochie na-eweta onye ọrụ ọhụrụ na ezi omume, site na ụlọ ọrụ nke obodo yiwu na-ekwenye, nwere ike ịnụ ụtọ ebe na-ekwu n'otu aka ahụ. Ndị na-achọ ọrụ oge izizi nwere ike ịnwe ụbọchị atọ n'efu.
Mechie mgbagharị ahụ. Maka ndị ọrụ na ndị ọrụ ụlọ ọrụ na mpaghara ndị kachasị mkpa, ngalaba gọọmentị na ụlọ ọrụ ga-enye ọrụ ụgbọ oloko pụrụ iche, ọrụ ụgbọ oloko pụrụ iche n'okporo ụzọ ụgbọ oloko, yana ọrụ ụgbọ oloko pụrụ iche maka ụgbọ ala ọkachamara. Gọọmentị ndị obodo ahụ ga-ahụ na ego mgbazinye zuru ezu.
Nye egwuregwu zuru oke na nzukọ ọrụ achụmnta ego. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-ewebata ndị ọrụ ma na-akwụ ụgwọ nchekwa mmekọrịta dịka iwu maka ụlọ ọrụ na-abụghị nke ọha na eze na mpaghara anyị, ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ ewebata ihe dị ka ndị ọrụ 5 n'otu oge, a ga-enye onye ọ bụla n'ime ha ego 500 yuan. Ọ bụrụ na ewebata mmadụ 20 n’otu oge, a ga-enye onye ọ bụla n’ime ha 1000 yuan.
Gbaa ụlọ ọrụ ume ka ha were ndị ọrụ ọhụrụ n'ọtụtụ ụzọ. Mpaghara m abụghị ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na-ewepụta oge izizi ka ọ bụrụ onye ọrụ ọrụ ụmụ akwụkwọ na-eme ezi omume ozugbo na dịka usoro iwu si akwụ ụgwọ mmekọrịta ọha na eze, nye 1000 yuan / enyemaka nke onye ahụ.